Guyyaa lamaffaa kan Artic temperature naannawa Midwest prompted humni akkaa addaan cite yoo tau kibx | KWIT
Dubbataan mana barumsa Sioux City akka jedhetti qilleensi qorraa mana barumsa Perry Creek Elementary keessati bishaan boonba gudicha akka kute himame. Barattooni seaati lama dura gad dhiifamanii. Bishaanis kan qulqulleefamuu fi bor barsummaf class dhaan akka qophaahu himan.
Manni fayyaa Siouxland Woodbury County keessati talaali guyyaa harbaa February 24th kennamu irrati information haarawa baase jira. Appaointments kan banamu guyyaa kamsaa seati 3 p.m iraaa online dhafi bilbilan kan banamu ta’a. garreewan talaali corona virus Phase 1A fi Phase 1B kan fudhatu nama umriin isaani 65 fi san ol tae, deebistoota tokkoffaa, barsiistota fi hojattoota mana barumsa, eeydota daaimaa fi hojattootta fayaati.
Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka himate namni haarwa corona virus due 26 yoo tau kan haarawa qabame ammo 500 oldha, Woodbury County keessa nama 23 dabaltee. Qorannoo bulti 14 godhame keessati namni qabame 5.7% gad xiqqaate jira.